के भन्छन त भारतीय कप्तान क्षेत्री र प्रशिक्षक स्टिम्याक ? – Khel Dainik
के भन्छन त भारतीय कप्तान क्षेत्री र प्रशिक्षक स्टिम्याक ?
काठमाडौं (खेलदैनिक) । भारतीय फुटबल टोलीका कप्तान सुनिल क्षेत्री नेपाली फुटबल समर्थक माझ नौलो नाम होईन । नेपाली मूलका क्षेत्रीको नेपालसँग बिशेष सम्बन्ध पनि छ । पुर्खौली घर झापा भएका क्षेत्रीको आमा नेपाल कै पूर्व अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी समेत हुन् । उनका आफन्तजनहरु काठमाडौं, पोखरा लगायतको शहरहरुमा पनि छन् ।
उनै क्षेत्रीले नेपाल–भारत बीच हुने मैत्रीपुर्ण फुटबल म्याच अघि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेपालप्रति आफ्नो विशेष झुकाव र आत्मियता रहेको बताएका छन् । ”नेपालप्रति मेरो विशेष सदभाव छ भन्ने कुरा म स्वीकार गर्छु । तर जब म नेपाल विरुद्ध मैदानमा प्रवेश गर्छु, नेपालप्रतिको त्यो सदभाव र लगाव समाप्त हुन्छ । मेरी आमा नेपाल कै हुनुहुन्छ । खेलकुदको माहौलमा हुर्किएर मलाई अनुशासित बन्न सिकाउनुमा मेरै आमाको देन छ ।” सुनिलले भने ।
कप्तान क्षेत्रीले खेल मैदानमा नेपाल सधै कठिन प्रतिद्वन्द्वीका रुपमा रहेको बताए । नेपाल विरुद्ध घरेलु मैदान र बाहिर खेल्नु दुई फरक कुरा भएको औल्याउँदै क्षेत्रीले नेपाल तत्कालका लागि घरेलु टोली रहेको कुरा आफूहरुले बिर्सन नहुने बताए ।
साथै क्षेत्रीले मैत्रीपुर्ण फुटबल म्याचका लागि आमन्त्रण गरेकोमा तथा भारतीय टोलीलाई दिइएको विशेष आत्मियताका लागि नेपाल सरकार र एन्फालाई धन्यवाद समेत दिए ।
उता भारतका मुख्य प्रशिक्षक इगोर स्टिम्याकले नेपाल विरुद्धको खेलको क्रममा बर्षा बाधक नहोस भन्ने चाहेको बताए । स्टिम्याकका अनुसार बर्षा नभए दुई टोली बीचको खेल थप रोमाञ्चक हुने उनले प्रतिक्रिया दिए । त्यति मात्र नभएर उनले नेपालको पछिल्लो खेलहरु हेरेको र विश्वकप छनौटतर्फ नेपालले राम्रो खेल्दै धेरै सुधार गरेको समेत बताए ।
साथै उनले नेपाल विरुद्धको मैत्रीपुर्ण फुटबल म्याचले आगामी महिना माल्दिभ्समा हुने साफ च्याम्पियनसिपका लागि आफ्नो टोलीलाई राम्रो तयारी गर्न पुग्ने बताए । उनले नेपालले कलात्मक फुटबल पस्किनेमा विश्वास व्यक्त गर्दै यो मैत्रीपुर्ण फुटबल म्याचले दुवै टोलीलाई फाईदा पुग्ने औंल्याए ।
← नेपाल र भारतबीचको खेलको टिकट मुल्य तय भारत विरुद्ध नेपाललाई केवल जितकै पर्खाई →
हरि खड्का विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भाद्र १६, २०७८
एपिएफ आहा! रारा गोल्डकपको फाइनलमा भाद्र १६, २०७८
मौरिसस विरुद्ध बन्द प्रशिक्षणमा रहेका सबैलाई अवसर भाद्र १६, २०७८
दीप ज्योतीलाई जिल्ला लिगको उपाधि भाद्र १६, २०७८
रशिला बिश्व वरियताको ७ औं स्थानमा भाद्र १६, २०७८
नेपाल विरुद्ध मौरिससः एक तिहाई दर्शकले रंगशालामा प्रवेश पाउने भाद्र १६, २०७८